Ukuthatha ngaphandle. izinhlobo zamapulangwe
Siding (zangaphandle) - material yesimanje ze-non-ezivuthayo ngoba abami olungaphambili lwesonto isakhiwo, okuyinto yakhelwe indlu ukuze ivikele izindonga emathonyeni ngaphandle: imvula, umoya, iqhwa, ilanga. Ngaphezu kwalokho, wenza tebuciko (zokuhlobisa) umsebenzi ngcono Ingaphandle yendlu, wasinikeza a look zanamuhla, ngaphandle kokudinga izindleko ezinkulu zezimali futhi kalula.
Ukuthatha uhlangothi ukuze Ingaphandle
Lena impahla emangalisayo ngoba yangaphandle udonga umhlobiso, kulula ukufaka futhi ayidingi ukwelashwa futhi amathuluzi akhethekile. Okwamanje kukhona izinhlobo eziningana zamapulangwe - izinkuni, vinyl, ukhuni, metal (steel, aluminium, ithusi) kanye plinth usimende. Lokhu kwaziswa akusho ukubola noma ukugqwala, ngoba iphathwa enkulu ekwakhekeni izakhiwo ekhethekile obumba ifilimu zokuzivikela.
Siding (yangaphandle) has a lot of izinzuzo:
ke okuhlala isikhathi eside ngokwanele (lapho ukukhwezwa kahle ingahlala iminyaka engu-50);
amelana omnene isinyathelo ngemishini;
Libhekisela impahla Isizalo ehlanzekile cishe non-ezivuthayo;
It ivumela ezindongeni zendlu ukuba "ukuphefumula;
ivame ukuba ayashesha ukubamba iphunga, akusho ukuheha ukungcola nothuli;
lula ukuhlanza usebenzisa hose engadini kanye eshaweni amandla.
Ukuze iwenze ube lula ukufakwa e panel saydingovyh babe sivala ekhethekile, latches.
Ezenziwe ngokhuni Imicu yotshani ukuthi ohlangene ngaphansi nengcindezi enamandla futhi izinga lokushisa eliphakeme, ne ukwengeza inhlaka ekhethekile. Material embozwe upende noma lacquer ngongqimba eziningana, okuyinto thembeke zivikela amathonya amabi kwemvelo. Ngaphandle, panel sibonakale sifana nomuthi yangempela. Impilo inkonzo yesimanje ukhuni zamapulangwe eseneminyaka engaphezu kwengu-15.
Ngokubukeka sifana battens sokhuni ehlukile ukhuni ukucutshungulwa kanye cross-ingxenye imikhiqizo isiqedile. Wenza kusukela drevesnotsellyuloznoy ingxube okuyinto onomfutho ngaphansi umfutho ophakeme futhi lokushisa. Lapho yokukhiqiza ukuthuthukisa ukusebenza ingxube yengezwe izithasiselo ekhethekile. I panel abe ubude 5.5 m, ububanzi - 11.5 cm ubukhulu - 9 mm. Izinkuni zamapulangwe enamathiselwe odongeni esebenzisa nezikulufi ngembobo siphelile elise phezulu panel. Sasondelana komunye nomunye uhlobo "nezilimi inkatho". It has ezixube imibala (28 imibala), izinhlobo eziningana ebusweni izakhiwo.
Isetshenziselwa umhlobiso ngokuphelele yimuphi mbumbulu. Ngokubukeka, kubukeka sengathi ibhodi ezivamile, kodwa akaphelelwa sikhalo salo ezibukwayo futhi eminyakeni engu-20, naphezu abukhali izinguquko kwesizini lokushisa, lina kakhulu futhi frost kanzima. Lokhu kwaziswa kudingeka okungenani ube yesondlo (ezinhle ukuhlanza hose nalokho neze singcoliswe). Lezi panel PVC zakhiwe polyvinyl chloride.
Steel zamapulangwe (yangaphandle) ngokuvamile sisetshenziswa kokuqeda zezakhiwo zezimboni, emafektri, izitolo kanye nokunye. Ukuze sivikele metal emathonyeni asemkhathini ke limbozwa inhibitor ukugqwala. Steel zamapulangwe itholakala ngemibala ehlukene (6-8 izimbali) kodwa powder Umdwebo umbala lebanga angenamkhawulo.
ethile wayo lomkhulu impela eningi isisindo, ngenxa okwandisa umthwalo phezu isisekelo sesakhiwo. Ngaphezu kwalokho, ebusweni steel is awabuyiswanga ngemva umonakalo ngephutha. Izindleko zamapulangwe kuphezulu. I panel abe ububanzi 12-55 cm.
Usimende Siding (ngaphandle) kuveza ukubumba i-fibre cellulose usimende. Inzuzo yayo eyinhloko itholakala lokuthi ukuthi akusiyo, ngenxa lokho isetshenziselwa kokuphothula umsebenzi ezakhiweni, lapho ematfuba izidingo umlilo umlilo bayanda. Kuyinto umswakama impahla ukumelana okuhlala zingamelana imithelela ilanga, amakhaza, imvula, umoya. I yokuntula kukhona umonakalo omkhulu, isisindo okusezingeni eliphezulu, ngenxa ofuna likhreyithi a ukwakhiwa enamandla. Ngaphezu kwalokho, ukuphathwa salo eziyinkimbinkimbi futhi esingesihle, futhi Umdwebo senziwa zamabutho umthengi. panel eziphezulu kuphela primed futhi grey umbala buthuntu. Ngakho-ke, emva kokufakwa, isidingo ababethi.
Ukuze abami usimende zamapulangwe kuyaqabukela esetshenziswa. Outdoor sekugcineni ikhaya zamapulangwe isetshenziswa kokubili entsha futhi ukubuyiselwa izindonga ubudala. Le nto kabanzi olungaphambili lwesonto ambozwe, ukushisa ukwahlukanisa kanye ukuvikelwa yangaphandle umthelela izindonga. Phakathi zamapulangwe futhi odongeni uma sezingashumekeka amaminerali uvolo noma ezinye impahla ukwahlukanisa uma kunesidingo. Outdoor zamapulangwe ngombala - umsebenzi akunzima kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, ungathola izinga lokuphila, ekhaya stylish.
Finishing Putty "Abembi": imikhiqizo, izici kanye Ukucaciswa
Dutch-kuhhavini, ubulula kahle
Usayizi elikhulu igalaji izimoto 2. Yini okufanele sicatshangelwe lapho ukuklama?
Ukulawula ikhwalithi amalunga eziphothene
Zobumba stoneware: nezinhlamvu, isicelo kanye izakhiwo. Kuyini egwadle Ceramic?
Amandla kagesi emizi yabantu: olulodwa yomugqa idayagramu. Ukushayela amandla womzalwane
Akvagrim ebusweni: isigaba master kanye namathiphu
Ithiyori Economic njengoba isayensi
Tyrannosaurus ngokumelene gigantozavra: esiyingozi kakhulu izilwane ezidla ezinye
Uyini isigwebo ngenxa yokuntula umshwalense imoto? Bangaki kufanele ukhokhe bikho umshwalense?
Le ncwadi ukuphathwa (isampuli)
Itiye Hibiscus: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Izimonyo premium: Deshele
Indlela ukuthatha lesi sidakamizwa "Chloramphenicol" cystitis
TV ewuchungechunge "Heroes": abadlali nezinhlamvu, ukubuyekezwa. Uchungechunge oluthi "Eyikhulu" (The 100)
Inhloko ibuhlungu, i-vertex ivele ihlukane: izimbangela ezingenzeka, izivimbela kanye nokwelapha
Ukushintshaniswa kwempahla yekhwalithi efanele. Yeka ukuthi ungangeni kanjani enkingeni kumthengi